TTSweet: စိတ်ကြိုက် အိမ်ချက်ဟင်းများ(၁) ...
Posted by T T Sweet at 6:50 PM
သက်ဝေ August 12, 2010 at 8:00 PM
T T Sweet August 12, 2010 at 8:01 PM
တော်သေး ... မရစ်သေးလို့ .... ဟူး ....
Vista August 12, 2010 at 8:34 PM
တီဆွိ အရမ်းရက်စက်တယ် ..( မျက်ရည်စက်လက်နဲ့ ပြောသွားတာပါ )
ဗိုက်အရမ်းဆာနေပြီးတော့ အလုပ်ကမပြန်ရသေးပါဘူးဆိုမှ ( ဟင့် )
:P August 12, 2010 at 8:52 PM
ဟားဟား ... ဒိပို့စ်တင်လိုက်တာ ရုံးကမပြန်ရသေးတဲ့ သူတွေနဲ့ အချိန်ကိုက်ဖြစ်သွားတယ် ... စောတီး ... စောတီး ...ဗစ်တာတို့ရေ ...
ရုံးမသွားပဲ အိမ်မှာ ဘလော့ကင်းနေသူတစ်ဦး
ပိန်းဥပေါတယ်ဆိုတာ..ဘယ်မှာလဲဟင်..တခါတလေ မူစတာဖာ မှာတွေ့ မိတာတောင်ဈေးကြီးသလားလို့..၄ ..၅ လုံးလောက်ထည့်ထားတာ ၂ ကျပ် လောက်ရှိတယ်..မြန်မာပြည်မှာ ၅၀ သားလောက်ကို ပုဇွန်နဲ့ ပင်စိမ်းရွက်လေးနဲ့ချက်..ပြောရင်းနဲ့စားချင်လာပြီ..
:P August 12, 2010 at 9:15 PM
ဆီးဖြူသီးက ဘယ်လိုထောင်းရတာလဲဟင်.. ငပိထည့်ရလား
T T Sweet August 12, 2010 at 9:41 PM
အယ် ... NTUC မှာရော wet market မှာရော ပိန်းဥတွေ ရောင်းတယ်လေ။ ဗမာပြည်ကလို သေးသေးလေးတွေ။ ကြက်သွန်တို့၊ အာလူးတို့ထားတဲ့ နားမှာ ရှိတတ်ပါတယ်။ အဲဒီနားမှာ ကန်ဇွန်းဥတွေလဲရှိတယ်လေ။ ဈေးတော့မေ့နေပြီ။ သိပ်ဈေးမကြီးပါဘူး။ ၁ကျပ်ဖိုးလောက်ဆို ဟင်းချိုချက်လို့ရပြီ။
ဆီးဖြူသီးက ပုဇွန်ခြောက်ရယ်၊ ငပိလေးနဲနဲရယ် ထည့်ထောင်းပါတယ်။ ငရုပ်သီးစိမ်းလဲထည့်တယ်လေ။
သက်ဝေ August 12, 2010 at 10:07 PM
အိမ်ပြန်တော့မယ့် ဆဲဆဲ ညနေ ၆ နာရီတိတိမှာ ဟင်းပုံတွေသာ ကြည့်သွားပြီး မနေနိုင်လွန်းလို့ မန့်ပြီး ကွန်ပျူတာ ပိတ်ခဲ့တာ... စာတွေ မဖတ်သွားဘူး...
အခုမှ တွေ့တယ်... ရစ်ချင်နေတယ်နော်... ဟင်း ဟင်းဟင်း...
နှိပ်စက်ကလူပြုတာ များပြီ... မနေ့က Sky Park... ဒီနေ့ ဟင်းတွေ...
မနက်ဖြန် သောကြာ... ဘာတွေလာအုံးမယ် မသိဘူး... ဟွန့်..............
ချစ်ကြည်အေး August 12, 2010 at 11:56 PM
မတ်စိ...အဲ မဆွိရယ်....စားချင်စရာကြီးတွေပါလား...အကုန်လုံး တို့အကြိုက်တွေဟ....
အီး ဟီး ဟီး...နိူတွားဘီ...(မပီတော့ဘူး..သူငယ်ပြန်တာ မြန်ထှာ..:)
ချစ်ကြည်အေး August 12, 2010 at 11:57 PM
ခုဟာက ၁ ဆိုတော့ နောက်ထပ် နှိပ်စက် အုံးမယ်ပေါ့လေ...:)
Shinlay August 12, 2010 at 11:59 PM
khin oo may August 13, 2010 at 12:49 AM
မနေ့ကတည်းက ချောင်းထဲက ပုံကို ရဲရဲကြီးကလစ်လုပ်ပြီးကြည့်ပြီးသား။
ညယံ August 13, 2010 at 12:57 AM
ပုံများအားလုံးရဲရဲကြီးကလစ်ပြီးသကာလ ဂလုံး၊ဂလွမ်နှင့် မြည်ပြီးပြန်သွားပါတယ်။:D
T T Sweet August 13, 2010 at 1:04 AM
အလုပ်ပိတ်ရက်မှို့ စိတ်ကြိုက်နှိပ်စက် ... အဲလေ စိတ်ကြိုက်ဟင်းလေးတွေ တင်မိတာ ... များအပြစ်လား ... အန်တီသက်ဝေနဲ့ အန်တီအကြည်တို့ရေ ...
ရှင်လေးမကြာခင်စားရတော့မယ်ဆိုတော့ ခုချက်နေတုံးဆိုတဲ့ သဘောလား ...း)
တို့အစ်မကြီး ကွန်ကွန်ကတော့ သူ့ကိုဒီက ချောင်းနေပါတယ်ဆိုမှ သူက တပြန်ကိုယ့်ကို့ ပြန်ချောင်းသွားတယ် ...
ချောင်းထဲက ရဲရဲကြီး ... အဲလေ ချောင်းထဲကပုံကို ရဲရဲကြီး ကလစ်တာတော့ ဘယ်ကောင်းပါ့မလဲ နော်။
ဟိုက် ... ညယံက စိတ်ကြီးတယ်နဲ့တူတယ် ... ရှောင်မှပဲ ...း)
စန္ဒကူး August 13, 2010 at 10:15 AM
may i know how to fry ကင်းပုံသီး please?
Thant August 13, 2010 at 1:50 PM
နောက်တစ်ခေါက်ထပ်လာကြည့်တယ်......တစ်ခုမကျန် အကုန်ကြိုက်တယ်.... :))
T T Sweet August 13, 2010 at 3:30 PM
ကင်းပုံသီးကြော်ဆိုပေမဲ့ ကြော်ချက်လေးပါ။ အရင်က ဖလန်တောင်ဝှေးကြော်တင်ဘူးတယ်။ အောက်ကလင့်ခ်ကို ကလစ်ကြည့်ပါ။
ချက်ပုံ၊ ချက်နည်းချင်း အတူတူပါပဲ။
ပုဇွန်ခြောက် များများ၊ ကြက်သွန်နီ၊ ကြက်သွန်ဖြူ ၊မျှင်ငပိ ငရုပ်သီးအရောင်တင်မှုန့်နဲနဲရယ် ရောပြီး ကြိတ်စက်နဲ. ကြိတ် ဒါမှမဟုတ် ငရုပ်ဆုံနှင့် ထောင်းပါ...
ဒယ်အိုး မီးဖိုပေါ်တင် ဆီထည့် ဆီကျက်ရင် ဆနွင်းမှုန့်လေးနဲနဲပစ်ထည့် အပေါ်ကထောင်းထားတဲ. အစာတွေထည်.ပြီး ဇွန်းနဲ.အဆက်မပျက်မွှေပြီးကြော်ပါ ...ရွေဝါရောင်သန်းပြီး မွှေးနံ့ထွက်လာရင် ကင်းပုံသီးထည့်ပြီး မွှေပေးပါ ...ငံပြာရည်၊ အချိုမှုန့် (စားတတ်ရင်)သင့်သလိုထည်းပြီးဆက်မွှေပါ။
ကင်းပုံသီး မနပ်သေးရင် ငရုပ်ဆုံဆေးရေလေးတစ်ဇွန်းစာလောက်ထည်. မွှေပြီး အဖုံးဖုံး နှပ်ထားပါ ... ရေခမ်းရင် အပေါ့အငံမြည်း လိုရင်ထပ်ထည်. ချလို့ရပါပြီ ... ကြက်ဟင်းခါးသီးကြော်၊ ကြောင်လျှာသီးကြော် အားလုံး ဒီအတိုင်း ချက်ပါတယ်။
ဖိုးတုတ် August 13, 2010 at 11:27 PM
ကျေးဇူးပြု၍ ကြက်ဥဟင်းချက်နည်းလေး ပြောပြပါလား
ဒီလောက်ဟင်းချက်ကောင်းနေမှတော့ အမကို ပင်နဆူလာမှာ စားသောက်ဆိုင်ဖွင့်ဖို.အကြံပြုပါတယ် ကွန်မန်.လာရေးတဲ့ သူတွေကို ၅၀% လျော့ပေး
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) August 14, 2010 at 5:21 AM
ဟင်းတွေအားလုံးက စားချင်စရာ စိတ်ဝင်စားစရာချည်းပါဘဲ.. ဖတ်ရင်းနဲ့ တံတွေးတောင် မြိုချလိုက်မိတယ်..
T T Sweet August 14, 2010 at 1:18 PM
Z အတွက် ကြက်ဥဟင်း ချက်နည်း ပို့စ်မှာ ပြန်ဖြည့်ပေးထားပါတယ်။ ဟင်းချက်ကတော့ ဒီလောက်ကြီး ကောင်းလှတယ်မဟုတ်ပါဘူး။ စိတ်ပါရင် ကောင်းကောင်းချက်ပြီး ဓာတ်ပုံလေးတွေ ရိုက်ထားတာပါ။ကွန့်မန့်အတွက် ကျေးဇူးပါပဲရှင်။
Thanks for ur kind reply of how to fry ကင်းပုံသီး...May good weekend be with your lovely family,ama gyi....
ဖိုးတုတ် August 14, 2010 at 8:55 PM
ဘဲဥချက်နည်းကို ပို.စ်မှာ ပြန်ထည့်လိုက်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မန်ကျည်းသီးက ဒီကရောင်းတဲ့ ထိုင်းမကျဉ်းသီး သို.မဟုတ် မြန်မာမကျဉ်းသီး ထည့်ရင်ပိုကောင်းပါသလား ထိုင်းမန်ကျည်းသီးက ပိုချဉ်တော့ မကောင်းဖူးလို.ထင်မိပါတယ် အမ အချိန်ရမှ အကြောင်းပြန်ပေးပါခင်ဗျာ
ကျွန်တော်က ဟင်းချက်ဝါသနာပါတော့ အမဘလော့ကို မကြာမကြာလာလည်ပါမယ်
မြင်းခွာရွက်၊ ကြောင်လျှာသီး၊ ကင်းပုံသီး၊ ချဉ်ပေါင်ရွက်၊ ပဲကြီး၊ ဆီးဖြူသီး ..ကောင်းလိုက်တာနော်။
တီတီဆွိကိုကြည်.ရတာ ဟင်းချက်တာမှာ လက်ဆိပ်ရှိပုံရတယ်။ချက်ထားတာတွေက ကြည်.လိုက်တာနဲ.တင် ကောင်းမှန်းသိသာတယ်။ ကျမလဲဟင်းချက်တာဝါသနာပါတဲ.သူမို.လို.လေ။
ဒါနဲ.စကားမစပ် တီဆွိက မနလေးဘက်ကလားဟင်၊ “စောနက” လို.ပြောတတ်လို.လေ၊
စုချစ် August 15, 2010 at 12:59 PM
အောင်မယ်... အဲဒီဟင်းတွေ ဒီလောက်များတာ အိမ်နားနီးပြီး ခါမှလဲ မမြည်းဖူးဘူးဆိုတော့ အားနာချာကြီးဖြစ်နေတော့မယ်...
SHWE ZIN U August 15, 2010 at 1:44 PM
အဲဒီဟင်းတွေ အကုန်ကြိုက်တယ် ချဉ်ပေါင်ဟင်း က အဲလို အညာမှာ ငါးသေးငါးမွှား ပုဇွန်ဆိတ် ရသမျှ အကုန်ထဲ့ ချက်တယ် အချဉ်အခါး ရောက်ချက် ကောင်းမှကောင်း
Thuzar August 17, 2010 at 2:05 AM
TT Sweet blog ကို တစ်ခါလာရင် အမြဲ ...ငိုမဲ့မဲ့ဖြစ်ပြီ..ဗိုက်ဆာဆာနဲ့..ထွက်သွားရတယ်.. :)
Thanks for cooking tips, anyway. :)
T T Sweet August 17, 2010 at 4:39 PM
လာလည်လေ ... ချက်ကျွေးရမှပေါ့။ လာတော့မလည်ပဲနဲ့များ ...
အနောနိမတ်စ်အတွက် ... တီဆွိက မန်းလေးက မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျောင်းတက်တုံးက အခန်းဖော် ၂ယောက်က မန်းလေးကမှို့ ဓာတ်ကူးသွားတာဖြစ်မယ်ထင်တယ်။
ကို z အတွက် ...
မန်ကျည်းမှည့်က စလုံးမှာ ဆားနဲ့နယ်ပြီးသား အနှစ်များများ၊ ခပ်ညိုညိုတွေ ရောင်းတယ်။ အဲလိုနယ်ထားပြီးသားက ဟင်းချက်လို့ကောင်းတယ်။ယိုးဒယားမှာလဲ ရှိမယ်ထင်ပါတယ်။
ဖိုးတုတ် August 18, 2010 at 12:44 AM
မတီတီဆွိ သို. .......
မန်ကျည်းသီးအကြောင်းကို ပြန်ဖြေပေးတဲ့ ကွန်မန်.အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် .......
ကျန်းမာ ပျော်ရွှင်ပါစေ ........
Peanut August 21, 2010 at 9:13 PM
တီတီဆွိ.... ပိန်းဥပာင်းချိုဘယ်လိုချက်....ပြောပြပါလား.... :D
T T Sweet September 23, 2010 at 2:25 PM
ပီးနပ်မေးထားတာ မေ့နေလို့ ခုမှ ဖြေဖြစ်တယ်။ နောက်ကျသွားတာ ချောတီးနော်။
ပိန်းဥအသေးလေးတွေကို မာမာလေးပြုတ် အခွံခွာထားပါ။ ကြီးရင်ထပ်ခြမ်းခြမ်း၊ သေးရင်အလုံးလိုက်ထည့်ပါတယ်။
ဟင်းချိုအိုးကိုလည်း ပိန်းဥပြုတ်နေတုံး တယ်ထားပါ။ ရေရယ်၊ ပုဇွန်ခြောက်၊ ကြက်သွန်ဖြူထောင်းထားတာရယ်၊ ကြက်သွန်အနီလေး လေးစိတ်ခွဲထားတာရယ်၊ ဆား၊ ငံပြာရည် ထည့်ပြီး ပွက်ပွက်ဆူအောင်တည်ပါ။ ပိန်းဥပြုတ်ထားတာကိုထည့်ပါ။ ပိန်းဥတွေ အိသည်အထိ ထပ်တည်ပါ။ ချခါနီး ဆားအပေါ့အငံမြည်း၊ လိုရင်ထပ်ထည့်၊ ငရုပ်ကောင်းလေးခပ်ပြီး စားလို့ရပါပြီ။